pp chemarata bhokisi Fekitori | China pp mabhokisi erudzi Vagadziri, Vatengesi
pp chemarata bhokisi rekufamba, imba inofamba, zvipfeko zvezvitoro, maindasitiri kurongedza uye zvigadzirwa zvigadzirwa
pp chemarata bhokisi rekufamba kweimba ndeimwe yeanopisa anotengesa bhokisi rakagadzirwa ne pp corrugated sheet, inogona kuve yakagadzirirwa nehukuru hwakasiyana, inogona zvakare kushandisa kune maindasitiri zvigadzirwa turnover, zvigadzirwa kutumira, storages, haina mvura uye yakasimba, inogona foldable uye nyore kuchitoro.
Corrugated bhokisi reimba inofamba, storages epurasitiki mabhokisi bhokisi
pp chemarata correx sikuta bhokisi yeDhiri Mabhokisi, coroplast scooter mudziyo
Bhokisi rakagadzirwa reMabhokisi eDhipatimendi anogona kugadzirwa akaenzana saizi uye anodhinda, inonziwo correx scooter box kana pp corrugated scooter box, iri bhokisi rakagadziriswa pamudhudhudhu wekutsanya chikafu chekuchengetedza uye kutumira kune vatengi, iyo scooter bhokisi kazhinji iri UV kudzivirira correx jira rine silkscreen logo.
P chemarata akachengetedzwa keji inogadzirwa ne pp inogona simbi, iyo pombi yakakomberedzwa imadziro uye padhi yakaturikidzana yejiji yekuchengetera, maererano nehukuru hwakasiyana hweseji, iyo p hollow jira inogona kugadzirwa yakaitwa saizi yakakura, iyo pepa remarata zvakare inogona kupeta, iyo pp yakakora bhodhi mapatya-madziro akakwana kuchengetedza zvigadzirwa kana uchifamba uye mutero.
pp hollow sheet kurongedza wedzera eva, epe, IXPE furo yezvidziviriro zvigadzirwa
PP mhango bhodhi rudzi rutsva rwezvakatipoteredza kuchengetedza kurongedza zvinhu, mukuita kwekushandisa hakuzoburitse guruva, uye hupenyu hwakareba hwebasa, inopfuura nguva 4-10 hupenyu hwekabhodhi, inogona kugadziriswazve, zvishoma nezvishoma inotsiva maitiro epepa chemarata bhodhi, ichinyanya kuratidzwa muchigadzirwa kurongedza.
P corrugated partiton, pp hollow sheet divider, inozivikanwawo seyakaganhurwa, iine kuchengetedza kwezvakatipoteredza hunhu, iri pep mhango jira maererano nezvigadzirwa zvakasiyana zvakagadzira chimiro chakakomberedzwa uye saizi yezvakasiyana uye zvinodzivirira zvigadzirwa, iyo p isina mhango pepa rinoshandiswa zvakanyanya muzvigadzirwa kurongedza, kutumira, storages, imba yekuchengetera, chitoro uye zvigadzirwa zvigadzirwa.
Iyo pp yakavezwa ESD yekudzoka bhokisi yakafanana neye pp yakagadziriswa turnover bhokisi, zvakare ine Isina-chepfu, isina hunhu, hunyoro-chiratidzo, ngura kuramba, kurema uremu, yakasimba, inokwenenzverwa, inoyevedza chitarisiko, rakapfuma ruvara, yakachena, inogadziriswazve, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza , hapana kusvibiswa uye mamwe maitiro.
zvemagetsi turnover bhokisi pp yakaunganidzwa ESD zvemagetsi dziviriro mudziyo
Pp chemarata chemashizha ekudzoka nebhokisi repurasitiki rinozivawo seRudzi p. furemu rega iro bhokisi riwedzere kusimba uye kusimba, rinogona kuwedzera zvakanyanya kugona kwebhokisi, rine rakakura nekupeta kuramba, kukwegura kuramba, simba rakakura rekutakura, kutambanudza, kumanikidza, kubvarura, kupisa kwakawanda, ruvara rwakapfuma, kurongedza bhokisi-rudzi rwekutengesa bhokisi rinogona kushandiswa pakubuda uye kupedzisa chigadzirwa kutumirwa kurongedza, mwenje, yakasimba, inokwanisika.
Yemahara sampuro yeChina Antistatic Hollow PP Bin chemarata bhokisi
Pp chemarata chemabhokisi ekudzoka nebhokisi repurasitiki rinozivawo seRudzi p. furemu rega iro bhokisi riwedzere kusimba uye kusimba, inogona kuwedzera zvakanyanya iro bhokisi kugona, ine hombe nekupeta kuramba, kukwegura kuramba, hombe kutakura simba, kutambanudza, kumanikidza, kubvarura, kupisa kwakawanda, ...